I-Mrudugandh Pool Villa Enendawo Yokubuka Izintaba zase-Girivan. - I-Airbnb
I-Mrudugandh Pool Villa Enendawo Yokubuka Izintaba zase-Girivan.
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Sonali
I-Villa ye-Infinity Pool enethezekile eseduze ne-Mulshi, Pune, engamakhilomitha angu-40 ukusuka e-Pune nase-97 km ukusuka e-Panvel, e-Mumbai.
~Le villa ivulekile ezivakashini ezingaba ngu-20 futhi inamagumbi okulala angu-4 +1 ikamelo lomndeni elivulekile elinezindlu zokugezela ezingu-5.
~ Awe-inspiring infinity pool ene-gazebo enhle
Ithala elivulekile elinendawo yokubuka iNtaba ukuze uphumule futhi uzijabulise ngokuthula nezindawo ezinhle.
~Ikhishi elinakho konke elinesevisi yokuthola ukunakekelwa okungu-24 ×7.
~ Umpheki wendawo ocingweni
Lona yi-Land plus One floor bungalow enekamelo elilodwa elivulekile esitezi esiphansi futhi elilodwa esitezi sokuqala kanye nesitezi esivulekile. Amagumbi okugezela angu-3 anama-heater amanzi, amathawula ahlanzekile
kanye nezinto zokugeza . Idekhi evulekile ehlukile ilungele ukuphumula endaweni eseduze nemvelo
Ikamelo lesithathu lisesitezi esiphansi futhi linokufinyelela okuhlukile. i-tendeative izitebhisi ezingu-15 ukusuka endaweni yokungena eyinhloko ye-villa.
Ikamelo lesine litholakala echibini lokubhukuda futhi cishe liyisinyathelo esengeziwe esingu-20 kuya ku-25 ukusuka ekamelweni lesithathu.
'UMrudugandh' use-Girivan Farm, okukunikeza indawo yokushaywa wumoya edingekayo edolobheni futhi ekuletha eduze nemvelo. Isakazeka ngama-acres ayizinkulungwane ezinamagceke aluhlaza okotshani kanye nezitshalo eziwugqinsi futhi ingama-40Kms kude ne-Pune City futhi ingamakhilomitha angu-35 ukusuka e-Lonavala.
Lena indawo enobungane, umndeni kanye nezingane lapho ungaphumula khona, ucabangisise noma uzijabulise ngokuphuma epaki lezemidlalo elihlanganisa i-Archery, i-Pistol Shooting, i-Rifel Shooting, i-Burma Bridge, i-Burma Bridge, i-hanging birdge, i-Cobwebliday, i-Comandoliday,
I-Zip Line/i-Fly Fox, umdanso wemvula njll.
Ungahlela usuku lwakho lonke ngeminye imisebenzi efana nokuhamba ehlathini, ukuhamba ngebhayisikili, umlilo we-Camp.
Ungavakashela ithempeli le-Hadshi elinomusa kanye neThempeli eliseduze le-Hadshi.
Phakathi nokuhlala kwakho sizokunikeza umsebenzi wokunakekelwa kwesikhathi esigcwele.
sicela uxoxe ngemibuzo yakho nabanakekeli futhi ugweme izingcingo ezivame nombungazi.
Isevisi yokudla ocingweni nayo iyatholakala.